ဖုန်းအားသွင်းရင်း ဖုန်းပြောရင် ပေါက်ကွဲပါတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းများ ထွက်ပါတယ်။ ယင်းသတင်းများဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပေါက်ကွဲတာတွေရော၊ အိမ်မှာပေါက်ကွဲတာတွေရော၊ အသားတွေကွာကျနေတာတွေကော အားလုံးက hoax တွေ မမှန်ကန် သတင်းတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ဖုန်းထုတ်တဲ့ ကုမ္ဗဏီက ထုတ်တဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် အားသွင်းကြိုး၊ အားသွင်း အဒတ်တာ တုံး ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ အကယ်၍ တရုတ်ပြည်က ဝင်တဲ့ Thrid Party ကြိုးများဆိုရင်တော့
pm Sunday, August 02, 2015 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Myanmar Event Park မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သဘင်၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ အနုပညာရှင်များမှ တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ရန်ပုံငွေ အလှူပွဲတော် ဖျော်ဖြေပွဲ
Nan Khin Zayar – 8 Days Cover Photos Set
Labels: မော်ဒယ် ဖက်ရှင်
မတင်ဇာမော်ရဲ့ ဝိတ်ကျအောင် နေထိုင်နည်း
အဆိုတော် မတင်ဇာမော်ရဲ့ ၅ လ အတွင်း ပေါင်ချိန် ၄၀ လောက် ကျအောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ထပ်ဆင် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
"ကိုင်းးးး အစားထိန်းတာ တစ်ခုထဲနဲ့ ၅လနီးပါးအတွင်း လေ့ကျင့်ခန်းမလို ပိန်ဆေးမလို ပဲ ဝိတ်ကျနိုင် တယ်ဆိုတာယုံပြီလားးး ဒီဇင်ဘာလလယ်၂၀၁၃ မှာ ပေါင်ချိန်၁၆၀ နီးပါးကနေ မေလလယ်၂၀၁၄ မှာ ၁၂၃ပေါင်ကျန်တယ် ဆက်ကြိုးစားမယ်ဗျိုး နောက်ထပ်၁၀ပေါင်လောက်ကျရင်တော်ပြီ
pm Wednesday, December 10, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
အသက်(၈၄)နှစ်အရွယ် ဦးစံမြင့်ကို တွေ့ရစဉ်/ဓာတ်ပုံ - ကျော်ဇင်သန်း
မြန်မာစကားကို အင်္ဂလိပ်လေယူလေသိမ်းဖြင့်ပြောသည့် ထိုတင်တင်စီးစီးစကားသံကို နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးဇာတ်ကားကြည့်ဖူးသော ပရိသတ်များ မှတ်မိကြဆဲဖြစ်ပါလိ့မ်မည်။
ယူနီယံဂျက်အလံအောက်က ဗြိတိသျှအရေးပိုင်မင်းအဖြစ် တော်လှန်ရေးကားတိုင်းလိုလိုမှာ ၎င်းကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Valentine's Dav HD .apk
Valentine's Dav HD. apk
pm Sunday, November 30, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
၉၊၀၉၊၂၀၁၄နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့နှင့် ၅၆ ကီလိုကွားဝေးသော နခေါပုထုန် မြို့နယ်အပိုင် ဆမ်ဖလန်းရပ်ကွက်ရှိ ပလတ်စတစ်ရုံတွင် အလုပ် လုပ်နေသော အလုပ်သမငယ်လေးတစ်ဦးအား ခယ်အိုဖြစ်သူမှ အလိုမတူ သားမယား အဖြစ်ပြုကျင့်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
အခင်းဖြစ်စဉ်မှာ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ မဇာသည် ပလစ်စတစ်စက်ရုံတွင် ညပိုင်းအလုပ် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်သောကြောင့် နေ့လည်တွင် အခန်းသို့ပြန်လည် အနားယူရာတွင်
pm Sunday, September 14, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
မြန်မာ့စပါးကြီး Aung La Nsang တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပါပြီ။
သတို့သမီးကတော့ Katherine Oliphant ဖြစ်ပါတယ်။
တိမ်ပြာပြာ နေ့တနေ့၊ နေသာတဲ့နေ့ မြက်ခင်းပြင်စိမ်းစိမ်းပေါ်မှာ ကျင်းပတဲ့ မင်္ဂလာပွဲမြင်ကွင်း ၆ မိနစ်စာ ရုပ်သံဖိုင်ကို ဒီစာ အဆုံးမှာ ထည့်ထားပါတယ်။
အင်တာနက်မြန်နှုန်းသင့်ရင် ကြည့်လို့ အဆင်ပြေပါမယ်။
မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင် တပတ်အလိုမှာ မိုးလေ၀သ ဌာနက ခန့်မှန်းခဲ့တာကတော့ ပွဲနေ့မှာ မိုးရွာနိုင်ချေ ရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီနေ့ တခြားအချိန် ရွာချင်လည်း ရွာခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်သံထဲမှာတော့
pm Tuesday, September 09, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
Lu Lu Aung random collection photos collection. She isanew model and write something which you most impressed about her photos. Enjoy9more photos inside
Ma Htet ( Make Up Artist ) in myanmar upload these photos on her facebook to share with her fans. She is not the only but yeah your favorite model Aye Myat Thu photos are here. check it out
ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ နတ္တလင်းမြို့နယ်ထဲက ရွာတရွာမှာ ပါးစပ်ပေါက် ၊ နှုပ်သီး(၂)ပေါက်၊ မျက်စိ(၃)လုံးပါတဲ့၊ ၀က်ကလေးတကောင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ DVB TV - 09.09.2014
၁ဝနှစ်ကျော် ထားခဲ့တဲ့ ဆံပင်ရှည်ကို ညှပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ခေတ်သစ် နောနော်
စာမျက်နှာတွေပေါ်က ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေတဲ့ တေးသံရှင် နောနော်နဲ့ မတွေ့တာ ၆လနီးပါး ရှိပါပြီ။ ပြန်တွေ့ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ နောနော်က အရင်နောနော် နဲ့ ကွဲပြားနေပါတယ်။ သူ့ကိုမြင်တွေ့နေကျ ပုံစံဆံပင် ရှည်ရှည် တွန့်တွန့်နဲ့ မဟုတ်တော့ဘဲ ဘေးအပြောင် နဲ့ အပေါ်ကို ဘေးခွဲထားတဲ့ ဆံပင် ပုံစံနဲ့တွေ့ ရပါတယ်။ ဒါက စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ အရာရာကို
- ရွှပိတုန်းစုပ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။
- စံပယ်တင်(ညာဘက်) မှဲ့ရယ်ဆိုပြီး အမျိုး သမီးတွေအတွက် အထင်ကရ မှဲ့ (၇)မျိုး ရှိ တယ်။
pm Sunday, August 31, 2014 1 comment: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
pm Sunday, August 31, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
Labels: ထူးထူးခြားခြားပုံနှင့် ဟာသပုံများ
မီဒီယာရှေ့တွင်တောင်း ပန်ပြီး သရဖူပြန်အပ်ရန်မေမြတ် နိုးအား Miss Asia Pacific World Organization၏ ကိုရီးယားနှင့်အ ရှေ့တောင်အာရှပိုင်း တာဝန် ယူထားသောဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာချွိုင် ဂျင်းကပြောသည်။
‘‘မေမြတ်နိုးက မီဒီယာတွေ ရှေ့မှာ တောင်းပန်ပေးမယ်ဆိုရင် သရဖူသိမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုကူညီ ပေးနိုင်တယ်။ ဒီအရာက မြန်မာနဲ့ ကိုရီးယားအတွက်လည်း အ ကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ပြီး မေမြတ် နိုးအတွက်လည်းအကောင်းဆုံး အရာဖြစ်မှာပါ’’ဟု မစ္စတာချွိုင် ဂျင်းကပြောသည်။
လှည်းကူးမြို့မှ အသက် ၆ဝကျော်အမယ်အိုတစ်ဦးအား ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကို စောင့်ရှောက်နေသည်ဟုဆိုသောနဂါး ဝင်ပူးသည့်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ဟုဆို
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး တူးဖော်ဆယ်ယူရန် ကြိုးစားနေသည်မှာ ၁၃ရက်တိုင်ရှိ လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ သာကေတမြို့နယ်အ နီး လှိုင်မြစ်၊ ပဲခူးမြစ်နှင့် ပုဇွန်တောင် ချောင်းတို့ဆုံသည့်နေရာ၌ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတူးဖော်မှု လုပ်ဆောင် နေခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသူအမြောက် အမြားရှိနေချိန်၌ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မိုင်၂ဝကျော်ကွာဝေးသည့် လှည်းကူး မြို့နယ်တွင် ခေါင်းလောင်းကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ နဂါးဝင်ပူးသည့်ဖြစ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်မှာ ခေါင်းလောင်း ကြီးကို စောင့်ရှောက်နေသည်ဟုဆို သော နဂါးမောင်နှမသုံးဖော်ထဲမှ တစ်ဦးက လှည်းကူးမြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် သီတာအေး (၅)လမ်းတွင် နေထိုင်သည့် အမယ်
pm Saturday, August 23, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
မြန်မာမိန်းကလေးရဲ့ အရှက်မရှိ ၊အမျိုးမစောင့် မိဘ မောင်နှမ ဆွေးမျိုး ကိုပါမထောက်
မင်းကော ခွေးမဖြစ်သွားတာပေါ့။လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းတို့ လုပ်ကြပါဦးဗျာ ဒါခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးလား၊
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ မြန်အောင်မြို့မှာ အခုတလော အတွဲတစ်တွဲရဲ့ Viber နှင့် အပြန်အလှန် ပြောထားတဲ့စာတွေနှင့် ဓာတ်ပုံတွေ လူထုအတွင်း ပျံ့နှံ့လို့နေပါတယ်။
pm Sunday, August 03, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
pm Friday, July 25, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
မိဘခြေရာနင်းဖို့ မင်းသန့်မောင်မောင် ခြေလှမ်းစပြီလား
အကယ်ဒမီ မေသန်းနုနဲ့ အကယ်ဒမီ စင်ရော်မောင်မောင်တို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသား မင်းသန့်မောင်မောင်ဟာ သူ့ရဲ့ အနုပညာပထမဆုံး ခြေလှမ်းအဖြစ် ကန်တော်ကြီးမှာ ကြော်ငြာတစ်ခုကို စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ မင်းသန့်မောင်မောင် မိဘတွေရဲ့ ခြေရာတွေကို နင်းပြီလား။
အသက် ၁၇နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်လို့ အနုပညာနယ်မှာ ခြေချမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ရုပ်သံကြော်ငြာတွေကို စရိုက်တာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်နဲ့ ဒါရုက်တာပညာကို နိုင်ငံခြားမှာ သင်ယူခိုင်းပြီး ပြန်လာတဲ့အခါ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာလုပ်ခိုင်းမယ်လို့ ဖခင်ဖြစ်သူ စင်ရော်မောင်မောင်က ပြောပါတယ်။
အကယ်ဒမီများရှင် မိဘနှစ်ပါးလိုပဲ ထူးချွန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်ကို ထိုးဖောက်နိုင်သူဖြစ်ဖို့ သူ မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မင်းသန့်မောင်မောင်ဟာ ဇူလိုင် ၂၃ရက်နေ့က Birthday Tea ကြော်ငြာကို သရုပ်ဆောင်ဟန်သီနဲ့ အမျိုးသားဇတ်ရုံမှာ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဒုတိယမြောက်နေ့မှာတော့ ကန်တော်ကြီးထဲမှာ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေဖြစ်သူနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ဖူးပေမယ့် ကျောင်းတက်နေရလို့ အခုမှပဲ အနုပညာကို စတင်လုပ်ကိုင်ရသလိုဖြစ်ပြီး အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်စလုံးက သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ ပညာကိုသင်ပေးနေတယ်လို့ မင်းသန့်မောင်မောင်က ဆိုပါတယ်။
သူ့ကို ပရိသတ်အနေနဲ့ အားပေးကြဖို့နဲ့ သူ့အနေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် သက်ဆုံးတိုင်လုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသမီးကိုယ်တွင်းရှိ လိင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၁၀ နှစ်ကြာမှ တွေ့ရှိ
Aberdeen တော်ဝင်ဆေးရုံမှ ၀န်ထမ်းများသည် ပြည်တည်နာနှင့် ခန္ဒာကိုယ်အလေးချိန် အလွန်အမင်း ကျဆင်းသည့် ရေဂါခံစားနေရသော အမျိုးသမီးတဦးအား ကုသပေးခဲ့ရာ ထိုအမျိုးသမီးသည် အင်မတန်အဖြစ်နဲသော Vesicovaginal fistula ဟူသော ဝေဒနာခံစားနေရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဝေဒနာသည် ဆီးသွားသည့်အခါ သားအိမ်လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ဆီးများ စီးဝင်စေသည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်ပဆိုက်ရောက်ထွက် ပေါက်မှ ပြုံးပျော်စွာဆတ်တောက်တောက်လျှောက် လှမ်းလာသည့် အသက် (၂၅)နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို လေဆိပ် အတွင်းရှိနေသူတို့က အထူး အဆန်းလိုက်လံကြည့်ရှုနေကြသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ကောင်တာသို့ ဝှီးချဲဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီး ဝှီးချဲပေါ်မှဆင်းလာကာ လာရောက်ကြိုဆို သည့်မိသားစုများဝန်းရံလျက် ပြည်တော်ပြန်ရောက်ရှိလာသည့်မိန်းကလေးက သူ့ကိုစောင့်ကြိုနေကြသည့်ဆွေ မျိုးသားချင်းနှင့် သူငယ်ချင်း တချို့ထံ ခပ်သွက်သွက်လျှောက်သွား သည်။
pm Thursday, July 24, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
pm Wednesday, July 23, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဦးနေဝင်း၏မြေးများဖြစ်ကြသည့် ဦးအေးနေဝင်း၊ ဦးကျော်နေဝင်းတို့က ဦးတေဇ ပိုင် အေဂျီဒီဘဏ်၏ ရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူ ကာ ပြည်တွင်း ဘဏ် လုပ်ငန်း အတွင်းဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် လာမှုနှင့် အေဂျီဒီ ဘဏ်၏ရှယ်ယာ မည်ရွေ့မည်မျှကိုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဆိုခြင်းတို့အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေရာ ၎င်းနှင့် ပတ် သက် ၍ ဦးနေဝင်း၏မြေးဖြစ်သူ ဦးအေးနေဝင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီ
အဆိုတော်ထူးအယ်လင်းကြိုက်သွားတာက သဲစိတ်ကို အလိုလိုက်ပြီး ဖြစ်သွားတာပါ
B.A (Eco)၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်။
(ဓာတ်ပုံများ - သော်ဟိန်းထက် / ဧရာဝတီ)
အခုလတ်တလောမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေက ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတယ်။ ဗီစီဒီသီချင်းတွေ ရိုက်ပေးဖြစ်တယ်။ သဲရဲ့တကိုယ်တော်ခွေအတွက် အသံသွင်းတာတွေ လုပ်နေတယ်။ သဲရဲ့ တကိုယ်တော်အခွေကို ၂၀၁၅မှာ ပရိသတ်လက်ထဲကို ပို့ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ သီချင်းတွေကတော့ အမျိုးစားအစုံပါပဲ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက၀ါသနာပါခဲ့တာက သီချင်းဆိုတာပါ။ မော်ဒယ်လ်အလုပ်ကတော့ အရင်ဆုံးလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ သီချင်းဆိုတာက ဘုရားကျောင်းမှာရော ခရစ္စမတ်ပွဲတွေမှာလည်း ဆိုဖြစ်တယ်လေ။ မော်ဒယ်လုပ်ရင်းကနေ ဗီစီဒီရိုက်၊ သီချင်းတွေရိုက်ရင်းကနေ ကိုယ့်သီချင်းအခွေလေးပါ လုပ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်နေတာပါ။
pm Sunday, July 20, 2014 No comments: Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
Aberdeen တော်ဝင်ဆေးရုံမှ ၀န်ထမ်းများသည် ပြည်တည်နာနှင့် ခန္ဒာကိုယ်အလေးချိန် အလွန်အမင်း ကျဆင်းသည့် ရေဂါခံစားနေရသော အမျိုးသမီးတဦးအား ကုသေ...
Yangon Media Group added2new photos. =========================== ========================== ငယ်ထွေး(ကလေး) ရန်ကုန်၊ ဓမ္မေ...
Wine Su Khine Thein - Black and Short Hair Fashion